XOG DEG DEG AH: Madaxweyne Farmaajo & Ra’isul Wasaare Kheyre oo midkood uu xilka weyn doono & Olole ka socda Muqdisho | Caasimada Online
Waxaa cirka isu shareeray khilaafka ka dhex tolan Madaxweynaha Somaliya, Maxamed C/laahi Farmaajo iyo Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Xasan Cali Khayre, ka dib markii uu Ra’iisal Wasaaruhu uu ka ka horyimid in uu is casilo.
Khilaafkan, ayaa ka dhashay tallaabadii C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax) loogu gacangeliyay Dowladda Itoobiya. Madaxweynaha Somaliya waxaa uu doonaya in uu isu furto Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre, maadaama ay shacabka ka suggayan in uu jawaab ka siiyo wareejintii Qalbi Dhagax.
Ka dib kulamo is daba joog ahaa oo Madaxweynuhu uu la lahaa dad kala talinayay, jawaabta uu arrinta Qalbi Dhagax ka siinayo bulshada, ayaa lagula taliyay in Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda uu ku qanciyo in xafiiska uu baneeyo, dadka Somaliyeedna uu u sheego in la galay khalad, khaladkaasina uu ka dhacay xukuumadda, isla-markaana uu weydiisto in dowladiisa la cafiyo. Waxaa jira warar sheegaya in markii horeba uu Madaxweynuhu cago jiid ka muujinayay wareejintii Qalbi Dhagax.
Sida lagula taliyay Madaxweynaha waxaa uu doonayay in dadka Somaliyeed uu ka raaligeliyo gacangelintii Qalbi Dhagax ee Itoobiya, isla-markaana uu u sheego maadaama ay meesha ka baxday xukuumaddii khaladkaasi gashay, uu diyaar u yahay in uu soo dhiso xukuumad kale.
Hase ahaatee Ra’iisal Wasaaraha, ayaa Madaxweynaha u sheegay inaanu marnaba xilka ka taggi doonin, waxaana uu ku wargeliyay in looga baahan yahay inuu aqbalo inay wada jooggaan Aqalka Madaxtooyada, haddii kalana ay ka wada taggaan.
Labada dhinac, ayaa olole xoogan ka wada Xarunta Madaxtooyada Somaliya, iyadoo midba midka kale uu qaabilayo Wasiirada iyo Xildhibaanadaba. Golaha Wasiirada waxaa la soo sheegaya in ay laba garab u kala jabeen, iyagoona la kala saftay Madaxda Qaranka.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo, ayaa sheegay in Ra’iisal Wasaare Khayre uu diiradda saarayo, sidii uu ku kasban lahaa kalsoonida Xildhibaanada Deegaanada Puntland ka soo jeeda, si Madaxweynaha xigga uu Puntland kaga yimaado. Ilo wareedyadan waxay xaqiijinayan in Khayre uu sidoo kale diiradda saarayo Xildhibaanadii codka siiyay Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynihii hore ee Somaliya, ee doorashadii 8-dii February looga adkaaday.
Nin ka tirsan Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha, ayaa inoo sheegay in Khayre uu ku farqo xirtay Dowladda Emirate-ka Carabta, oo iyadu geed gaaban iyo mid dheerba u fuuleysa, sidii uu meesha uga bixi lahaa Madaxweyne Farmaajo.
Emirate-ka oo ka mid ah xulufada Sacuudiga ee go’doomiyay Dowladda Qatar, ayaa u muuqdo mid ka samri la’, doorkii ay Villa Somalia dhexdhexaadka kaga noqotay xiisadda u dhaxeysa Wadamada Carbeed.
Emirate-ka, ayaa xusulduub ugu jira in Madaxweynaha xigga uu ka yimaado Deegaanada Puntland, Ra’iisal Wasaaruhuna uu noqdo shakhsi haysta taageerada Dam Jadiid, waa garabkii Xasan Sheekh Maxamuud’e.
Khayre oo horey ula soo shaqeeyay Dam Jadiid, ayaa dagaal u geli doono in ay isaga u xushaan, in mar labaad loo soo magacaabo Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, si shaqada uu hayo uu u dhameystiro.
Garabka Farmaajo, ayaa isu haleynaya Dowladda Qatar iyo ganacsato Somaliyeed, iyadoo ay rajadoodu tahay inay ka hellaan dhaqaalihii lagu ridi lahaa Xasan Cali Khayre, Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda.
Qaar ka mid ah Xildhibaanadii soo dooratay Farmaajo, ayaa caro u qaba Ra’iisal Wasaare Khayre, kaasoo aan ku soo darin xubnaha Golihiisa Wasiirada. Xildhibaanadan waxay rajo ka qabeen haddii ay codka siiyaan Farmaajo, in Golaha Wasiirada ee ugu horeeyo lagu soo dari doono.
Qasriga Villa Somalia, ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxaa si xowli ahi looga dareemay is xulufeysiga ka soconaya. Farmaajo & Khayre oo god weyn uu uga qodon yahay Villa Somalia, ayaan la saadaalin karin midka ku dhici doono.
Tallaabadii ee Khayre iyo Farmaajo uga gaabsadeen ka hadalka wareejintii C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax), ayaa waxaa la hadalhaya inaanay sii socon doonin maalmaha ina soo aadan.